Uyifaka njani i-ClockworkMod Ukubuyisela kwi-Samsung Galaxy Tab p1000n | I-Androidsis
Ngaphambi kokuba ndiqale nantoni na, ndifuna ukukuxelela ukuba ndigqibile bhala esi sifundo ngenxa yezicelo ezininzi ezivela kubasebenzisi Esi sixhobo esingafumaniyo ukufaka i-ClockworkMod Recovery kwifayile ye- I-Samsung Galaxy Tab p1000n.
Ndifuna ukukulumkisa ukuba yonke into oyenzayo ngesixhobo sakho iya kuba phantsi koxanduva lwakho, kuba nangona inkqubo ixhaswa ngamagqabaza amaninzi kwiiforamu ezahlukeneyo, ukuba wenza impazamo kwifayile, unokuba nephepha elihle, elibiza kakhulu.
Okokuqala ndikuxelela ukuba zonke iinkqubo zokufundisa endizenzayo, okanye uninzi, zixhaswa ngovavanyo kwizixhobo zam, kodwa kule meko akufani njalo kuba andinayo loo modeli yeTab.
Siza kuqhuba inkqubo sisebenzisa isixhobo esibengezelayo seHeimdall, apha ngezantsi ndikunxibelelanisa nesifundo sevidiyo esenziwe ndim uyifaka njani iHeimdall kwiWindows.
Xa sele ifakiwe Heimdall, abaqhubi kunye nokudibanisa I-Samsung Galaxy Tab p1000n kwimowudi yokukhuphela, kwaye siqinisekisile ukuba inkqubo iyasiqonda isixhobo, sinokuqala ngesifundo.
3 Ukudanyaza i-Android 2.3.3 ngeHeimdall
4 Faka ukubuyiswa kweClockworkMod
Ukufaka ifayile ClockworkMod Recovery, Kuya kufuneka sibe ne I-Samsung Galaxy Tab p100n ngohlobo Isonka sejinja 2.3.3Ungajonga ukuba unayo le nguqulo kwimenyu yeseto yezixhobo:
Ukuba uyifakile le nguqulo Android njengoko ndikubonisa kwifayile ye- umfanekiso ongentla, ungatsiba inyathelo lokufaka i-firmware, ukuba akunjalo, kufuneka uqale ukhanyise i-firmware kwaye emva koko sinokukhanyisa ukubuyisela kwakhona.
Kule khonkco ungalanda ifayile ye-zip kunye ne-firmware kunye nokubuyiselwa okulungisiweyo.
Ngaba ibhetri yefowuni ihlawuliswe ukuya kuthi ga 100 x 100 y ukulungiswa kwe-usb kuvunyelwe kwimenyu useto / usetyenziso / uphuhliso, kunye nokujonga ukuba uyakwazi ukufikelela kwifayile ye- Ukukhuphela kunye nemowudi yokubuyisela.
Ukudanyaza i-Android 2.3.3 ngeHeimdall
Nje ukuba ifayile ye-zip ikhutshelwe siya kuyivula kwi-desktop yethu kwaye ngaphakathi kwayo kufanele ukuba zibe neefayile ezimbini, enye yazo icinezelwe.
ifolda engacinezelwanga yile eneefayile eziyimfuneko iflash firmware i-2.3.3, enye, xa sele sikhanyisile i-firmware kuya kufuneka siyivule, kuba yile fayile equlathe Ukubuyiswa kweMod.
Siza kuqhuba ifayile ye- Ngaphezulu kwaye isikrini esiza kulandela siza kuboniswa:
Ngoku siza kucofa kwithebhu flash kwaye siza kubeka iifayile nganye nganye kwindawo yazo ngononophelo olukhethekileyo ukuba zingenzi iimpazamo, nje ukuba yonke into ifane nale ikumfanekiso ongezantsi, jonga ngokukodwa ukuba ibhokisi Ukuhlulwa kwakhona kukhethwe, sinokudibanisa I-Samsung Galaxy TAb p1000n kwimowudi yokukhuphela kwaye ucofe kwiqhosha Qala.
Xa inkqubo igqityiwe siya kuba nohlobo olufakelweyo 2.3.3 Isonka sejinja kwisixhobo kwaye singaqhubeka ukufaka ifayile ye Ukubuyiselwa kwakhona.
Faka ukubuyiswa kweClockworkMod
Siza kubaleka kwakhona I-Heimdall-ngaphambili kwaye siza kukhetha kwakhona ithebhu flash, kwiFayile PIT, Siza kukhetha ifayile enye ekwifayile ye- Ifolda yeFirmware, efanayo naleyo besiyisebenzisa ngaphambili.
Ngoku kufuneka sikhethe ifayile ye kernel, Kwaye koku siza kukhetha ifayile zimage isuka kwenye ifolda ekhutshelweyo, inefayile enye kuphela zimage ngaphakathi.
Siza kujonga ukuba ibhokisi Ukwahlula kwakhona akuhloliswanga ngeli xesha, Kwaye siya kuqhagamshela i-Tab kwakhona kwimowudi yokukhuphela, nje ukuba yamkelwe yi Heimdall siza kucofa Qala kwaye siya kulinda inkqubo ukuba igqibe.
Ngeli xesha inkqubo ikhawuleza kakhulu, xa I-Samsung Galaxy Tab p1000n Iya kuqala kwakhona kwaye uya kuba nokufumana kwakhona okuguqulweyo okanye Ukubuyiswa kweMod kwenkqubo kuyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyisebenzisa kanjani iHeimdall kwiWindows
Khuphela - Ukubuyiselwa kwakhona p-1000n-firmware 2.3.3-mas-recovery
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyifaka njani iMbuyekezo kwi-Samsung Galaxy Tab p1000n
Enkosi ngesifundo sale modeli ithile, ukuba nje ndinexesha ndizakuyivavanya
Kwi-P1000L awuzukufumana tuto?
Ndizama ukufumana into
Enkosi uFrancisco, ndiyathemba ukuba unento kungekudala, ndizakubukela. Ukubulisa
Ndiyabulisa kuFrancisco, ingaba unayo into ye-p1000L? Ndikhangele kwaye ndakhangela kwaye akukho ndlela yokufumana, makungabikho fakela i-rom, ingcambu ye-tab kuba ndine-gingerbread 2.3.6, ngaba sele unayo into?
Inyaniso kukuba andinalo ixesha elininzi lokujonga macala onke
UFrancisco, kufakelo lwe-p1000n 2.3.3 ngokufumana kwakhona ne-odin unayo into? Khange ndikwazi ukuyihlaziya kakuhle ngokufumana kwakhona kwaye ndiyilayishe kwi-4.0 kuba ngeheimdall ayisebenzi kum, indinika impazamo -12 kwaye akukho mntu uyibekileyo kuba kufanelekile! Enkosi
Enkosi kakhulu, ngokugqwesileyo, enkosi kuba andifumananga ndawo.
Molo, uyazi ukuba ithebhulethi ihlala kwiscreen se-galaxy tab kwaye ayiqhubeki, izakuba yintoni?
Molo, uyazi ukuba ithebhulethi ithi ithebhu yeklasikhi yelizwi kwaye ilizwi leerobhothi lithetha into ngesiNgesi kwaye ihlala apho kwaye ayiqhubeki, izakuba yintoni?
UDaniel Rodriguez sitsho
Ukuqalisa kwakhona kuhlala ngaphezulu kwe-7min emva kofakelo lwe-CWM, enyanisweni ukuba umamele kakuhle into eyithethayo ngesiNgesi iyakulumkisa ukuba kuthiwe NGEMIZUZU EMIBINI umsebenzi wokuqalisa nge-CWM uyaphela. Kodwa into endiyiphakamisayo kamva iyenzeka kum. Salu2.
Phendula kuDaniel Rodriguez
Eli alonso sitsho
Kwenzeka into efanayo kum, kwaye ayiveli apho. Nasiphi na isisombululo?
Phendula uEli Alonso
Molo, ngokulandela esi sifundo se-chafa, kwenzeka into efanayo kum kwi-TAB P1000 kwaye ayiphumi apho, ungayisombulula le ngxaki?
Uyayazi iheimdall indixelela Impazamo: Ayiphumelelanga ukufikelela kwidivayisi.isbusb impazamo: -12
Molo ndizama ukukhanyisa iThebhulethi kodwa kwiifayile ozibeka kwikhonkco andizifumani iifayile ze-IBL + PBL naphi na (indixelela ukuba kufuneka ibe ngu ". Bin") kwaye i-kernel ayizifumani, ndinike eminye imiqondiso yokwazi ukuba ndingenza ntoni
Ukubuyisela kwakhona kundiphosela impazamo: E: Ayiphumelelanga ukuqinisekisa utyikityo lwefayile epheleleyo
E: Uqinisekiso lokutyikitya aluphumelelanga
Kungenxa yokuba unokubuyiswa komzi mveliso
Ngaba unokuphinda ulayishe ifayile yekernel? Andiyifumani kwakhona.
Ndisandula ukuvavanya ikhonkco kwaye isebenza ngokufanelekileyo
Ndinempazamo elandelayo kwikhonkco:
Isimo se-HTTP 500 -
Chwetheza ingxelo yokuNgafani
Inkcazo Umncedisi udibene nempazamo yangaphakathi () eyithinteleyo ekufezekiseni esi sicelo.
Qaphela umkhondo opheleleyo wesizathu sengcambu uyafumaneka kwi-Apache Tomcat / 6.0.16 logs.
UKarg Ramirez sitsho
molo mhlobo wam ovela kula ngxaki inye kodwa ndisebenzise uhlobo lwakudala lweheimdall i-1,3,1
Phendula uKarg Ramirez
Ewe, ndaphinda ndazama, ndathatha isitokhwe ndasigxotha, kodwa ngoku ayidluli ekukhutshweni kweefayile ukusuka kwi-CM9 ezinzileyo ukuya kwi-p1n, ihlala isendaweni yokufaka esombulula kuphela ukushiya isitokhwe kodwa ifake i-Humber CWM ishiywe kwesi sifundo, ndamnika i-3wipes zakhe, ndamnika ukufaka kwi-sd, wakhetha i-cm9.0.zip, ukukhutshwa kwefayile kuqala, kuyaqala kwakhona ukuqhubeka, kundinika ilogo yeCYANOGENMOD, ukukhutshwa kuqala kwakhona kodwa Ngaphantsi kwemizuzwana emi-3 ibeka i icon ye-android ilele phantsi kwaye ivule ngonxantathu obomvu onophawu lwesikhuzo ngokungathi iyasilela kwaye iqala ngokungenammiselo de ndiyicime, umntu angandixelela ukuba leliphi inyathelo okanye ifayile endiyishiyayo kufakelo?
Ngexesha lesithathu kunye novavanyo lokugqibela, zama ukufaka i-CM9.0 ezinzileyo yeCyanogenmod ngaphandle kokusula ngokubuyisela esi sifundo kwaye iwele kwilog efanayo, ubeke isitokhwe kwakhona, uyisuse, uyisuse, ugcine yonke into enefolda ye-EFS ifakiwe njengothintelo, ndifakele ekubuyiseleni enye kwakhona kwaye enye i-kernel ekucingelwa ukuba ye-cm9 ndayibuyisela kwakhona i-CM9.0 ezinzileyo yaphinda yawela kwiluphu kwakhona, ndaphinda ukuphinda ukufakwa kwesitokhwe esineengcambu kunye ne-CM10 kernel ukubona ukuba ndingakwazi na fakela i-CM9.0 ezinzileyo kwaye akukho nto, ke ngokuqinisekileyo ndiyilahla itawuli ngayo yonke le nkunkuma, into endikhathazayo kukuchitha ixesha ndifunda izinto ezingancedi okanye ukusombulula iingxaki kwaye kubonakala ngathi akukho mntu ubakhathaleleyo okanye ayenzeki kubo. ngokufanayo nam. Ke ndiyathemba ukuba amagqabantshintshi am aluncedo kwaye xa ewela kwinto eyenzekileyo yenza ngokufanayo nam !!!!!
Ewe, zama ukufaka ukubuyisela kwakhona abakushiye kwikhonkco lokukhuphela lale khokelo kwaye i-tab ayidluli ngaphaya kwe-logo kunye namagama ambalwa avela kumfazi onerobhothi, ndiyicime ngenkani kwaye ndizama ukufikelela ekubuyiseleni kwaye iqala kwakhona ngokungapheliyo , ikwayiloo nto bayibonisayo kumfanekiso we-TTT (Trinidad and tobago) (ngokwe Sammfirmware: P1000NUUBJP7), ndiyithandile le tutorial kuba ndiye ndafumanisa ukuba kwi-W7pro X64 xa kufakwa umqhubi we-Heimdall ngoku ODIN AKAYENZI FUMANA ISICWANGCISO, sombulula ngokubuyisela isitokhwe kunye no-Odin kwenye iPC. Imibuliso evela eVenezuela.
xa ndifaka ezi fayile zimbini ukufaka ukubuyiswa kwe-clockworkmod, iheimdall indixelela ngempazamo kwaye iphinda iqalise ithebhulethi kwaye ayinakufakwa .. ndenza ntoni? ndicela uncede ..
Kubonakala ngathi unebhokisi yokwahlulahlula-hlula ihlolwe, xa ukhanyisela ukubuyisela akufuneki kube njalo, ngaba uqinisekisile ngezo nkcukacha? Ndilandele ukufundiswa kodwa into endiyiphakamisileyo apha ngezantsi yenzekile kum.
Mholo. xa ndizama ukusebenzisa iwotswordmod elheimdall indinika le mpazamo.
Kuqala uqhagamshelo ...
Ikhangela isixhobo ...
IMPAZAMO: Ayiphumelelanga ukufikelela kwisixhobo. Impazamo ye-libusb: -12
Ikhompyuter ifunyenwe yinkqubo, ikwimo yokulungisa imeko ye-usb ke andazi ukuba kwenzeka ntoni ...
Phinda ufake kwakhona abaqhubi, yiyo loo nto ufumana le mpazamo, ndikuxelela ngamava
molo jonga ubeke ithebhulethi kwimowudi yokukhuphela, kwaye uye kufakela abaqhubi nge-zadig, kuphela kwendlela endisebenzele ngayo, ukwenza oku sele ndiyazi i-heimdall !!!
mhlobo oku kundinceda ukuba ndisuse i-brikeo kwitafile yam
UEdwin vargas sitsho
Enkosi mhlobo, ubusindisile ubomi bakhe, i-GT-P1000N yam ngokuzama ukuyisusa ingabinamsebenzi kwaye ngale nto ibingathi intsha, enkosi
Phendula uEdwin Vargas
Inye kufuneka yenziwe kwiNandroid Backup xa ufaka iRom ephekiweyo ukuba kukho nayiphi na ifayile ekhoyo ukuze isebenze kakuhle uyibuyisela… Kodwa kuyacaca ukuba khange bayicacise kum ukuba oku kuyasebenza nakwi-STOCK kwaye ngoku ndishiywe ndingenawo unomathotholo kwaye ayithathi ukwamkelwa ngomnxeba, enkosi kwakhona.
Zama ukuphinda ufake ifayile kwifolda ye-efs ngomgca wokuyalela we-heimdall kwaye ihlala ifana. Ukuba umntu uyazi ngaphezulu kweentlanzi ezifakiwe, ndinike uncedo oluncinci. Ubuncinci ndiyikhuphile kwiBrick kodwa andikwazi ukwenza iminxeba kunye nokuntywila nge-3G xa ndibhadula. Ngaphantsi ndinokufaka i-CM9 okanye nayiphi na into ephuma kwiiROM eziphekiweyo. Ndicinga ukuba ndifumana inkonzo yezobuchwephesha kwaye ndiwele iminwe yam.
Ndikhetha umgodi endiwubekayo ukongeza kwaye kuvela omnye kuphela okanye kuya kufuneka ndenze ukuze bavele kakhulu
Nokuba ndimbi kakhulu okanye andiqondi
ISIKHUMBUYO SIMNYAMA !!!! Akukho nto yenzekayo NDINCEDE XFAAA
ISIKHUMBUYO SIMNYAMA !!!! Akukho nto yenzekayo NDINCEDE XFAAA ndincede nabani na owenze okufanayo
indinika impazamo Impazamo: Ayiphumelelanga ukufikelela kwisixhobo. Impazamo ye-libusb: -12, sele ndibabuyisile abaqhubi, kwaye akukho nto !!
umntu ndincede undinike le mpazamo !!!
Sele ndizamile ngeheidall 1.3.1, 1.3.2 kwaye sele ndifake abaqhubi amatyeli aliqela !!! Andikwazi kuhlaziya ukubeka kwakhona
Molo mhlobo, usisombulule njani impazamo eyi-ERROR: Ayiphumelelanga ukufikelela kwisixhobo. Impazamo ye-libusb: -12 ,, enkosi kwangaphambili
Okokugqibela ndakwazi ukuhlaziya i-Tab ye-P1000N yam ye-Tab nge-Android 4.1.2 kodwa inguqulelo ye-cyanogenmod, cm10-20121021-HumberOS-p1n, kubahlobo abanengxaki endishiya ikhonkco apho ndiyikhuphele khona le nguqulo ekuphela kwayo esebenzayo kwithebhu yam yegalaxy 7 P1000N…
Kwelo phepha khuphela oku kulandelayo:
sgt7-cm10-20121021-HumberOS-p1n.zip 144.99 MB 2012-10-20 23: 46: 14
Inkcazo: CM10 - GT-P1000N
kungoko ndiyigcinile kunye: gapps-jb-20121011-sign (andikhumbuli ukuba ndiyikhuphele phi kwabaninzi)
Kwimemori yangaphakathi (hayi kwi-sd yangaphandle) eyayiyimpazamo yam kwaye yandinika ukusilela xa kufakwa kwimemori yangaphandle okanye kwi-micro sd.
kungoko amanyathelo njengoko umhlobo uFrancisco Ruiz watsho
Ndiyathemba ukuba umntu othile uza kuyisebenzisa le p1000n
Enkosi ngolwazi, i-cm9 ye-cyanogenmod ayishiyanga iqalo lokuqalisa kwaye ayikaze ifakelwe, ukuba ndiyifaka ngobuchwephesha kuya kufuneka ndiyise kwinkonzo yezobuchwephesha ukubona ukuba bayayifumana na imei nebhokisi ebonisiweyo. Ndiyikhuphele le nto, emva koko ndiza kunika imvume yam ukuba iyanelisa kuba ukubuyiswa koqobo bekuphosa iimpazamo ezininzi kum.
akukho nto, isifaki se-cm10 sindiphosela impazamo, kodwa i-gapps ukuba iyabavumela ukuba bafake, ke andenzi nto ... kuya kufuneka ndibuyele kwisitokhwe ndoyisile kwakhona, enkosi ngokuvuya
Ukuba impazamo enye eyandinika ngaphambili njengamaxesha ayi-7 xd, jonga ungagcini i-zip kwimemori ye-sd, buyela ku-2.3.3 kwaye ugcine zombini i-gapp kunye ne-sg7 ... zip kwimemori yangaphakathi ngaphandle kwefolda emva koko yenza zonke iinkqubo ekugqibeleni unedatha yokusula kunye ne-cache yokusula, yinike le serca ukuba impazamo indinike iveki kwaye ndingazi ukuba ndenze ntoni!
Molo, ndifumana impazamo 7, kwaye andazi ukuba ndithini kwakhona. Nceda
Ungayigcini kwi-sd, yigcine ngaphakathi kwithebhulethi kwaye emva koko wenze onke amanyathelo, iyandinceda ke ukuba ndichithe iveki kunye nethebhulethi kwi-2.3.3 ukuba akukho kwanto de ndikwazi !!!
Umhlobo olungileyo ndine-tab 7 p1000n ene-2.3.3 band 2.6.35.13 humberOs # 20110925 Humberos compilation. khuphela iifayile ezimbini ozithethayo kwaye uzibeke kwimemori yangaphakathi. xa uyinika ukufaka iarom endinika yona: ufakelo luyekisiwe .. kodwa iapps ukuba uyayifaka. Ungandinika uncedo lokuhlaziya u-4.1.2
Molo mhlobo, ungandinceda mhlobo olungileyo ndine-tab 7 p1000n ene-2.3.3 band 2.6.35.13 humberOs # 20110925 Humberos compilation. khuphela iifayile ezimbini ozithethayo kwaye uzibeke kwimemori yangaphakathi. xa uyinika ukufaka iarom endinika yona: ufakelo luyekisiwe .. kodwa iapps ukuba uyayifaka. Ungandinika uncedo lokuhlaziya ku-4.1.2
Loo bhuti uyinqaba, yindlela efanayo endenze ngayo kwaye yindlela endikhonze ngayo, kungenjalo, ukuyibeka kwi-sd kundinike impazamo yesi-7 ndiyazi ukuba inokuba yiyo!
Molo, ndiqala kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye ndiyinike ufakelo kodwa ufakelo luyaphuma. ngokubhekisele
umhlobo olungileyo, ndingayikhuphela phi le fayile? Akusekho ngokunokwenzeka ngekhonkco, ungandinika enye?
Mholo! Ndizamile ubuncinci amatyeli alishumi ukwenza inkqubo ngeefayile ezininzi endizikhupheleyo, ndade ndayibuyisela kwakhona i-firmware kwaye ngalo lonke ixesha xa ndifaka ukubuyiswa kwemowudi yewotshi, xa uqala kwakhona isixhobo ekuqaleni isikrini sijikile kodwa akukho mpendulo, emva koko icima kwaye ivele kuphela amaqhosha angezantsi akhanyisiwe kodwa akaphenduli ... Nceda, ndifuna ngokwenene ukufaka i-IceCreamSandwich .. Enkosi ngokundinceda !! Ikhompyuter yam yithebhu yesamsung ye-samsung i-GT-P1000N ene-Android 2.3.3 baseband version P1000NUBJP3 Kernel 2.6.32.7 se.infra@SEP-24 # 2. Ndiyabulela kwangoko…!!! juancarcol@hotmail.com
Xa usenza ufakelo kwaye uqala kwakhona, yicime kwaye ufake ukubuyisela kwaye wenze idatha yokusula kwaye usule i-cache kwaye uyiqale kwakhona okanye ukuba ayisebenzi kuwe kwaye iyi-2.3.3 oyifakayo
Uyigcina kwimemori yangaphakathi yethebhulethi, endikhonze yona nge-P1000NUBJP
Molo, ngaba umntu angandinceda nceda, ndifuna ukuhlaziya i-p1000n yam kodwa andinalwazi lokuba ungayenza njani, ithebhulethi yam inayo
Inguqulelo yebhendi: P1000NUBJJ3
Inguqulelo yeKernel: 2.6.32.9 ingcambu @ Sep-57 # 1
Yintoni ekufuneka ndiyenzile ukuyivuselela kwi-Android 4? Ngaba kunokwenzeka ngecwecwe endinalo? Zeziphi iifayile endinokuzikhuphela?
Molo, ndiyifakile le nguqulo kwi-p1000n cm10 yam kodwa andikwazi ukunxibelelana nenethiwekhi yedatha engu-3g okanye h + kuhlobo lwe-cm 9 ukuba ndinokwazi
Ukugqwesa kundincedile ukwehlisa isantya kwi-Gingerbread 2.3.6 ukuya kwi-2.3.3, sebenzisa kuphela inguqulelo ye-heimdall 1.3.1, indinike impazamo nge-1.3.2 Enkosi kakhulu !, Khange ndiyifakele ukubuyiswa kweCWM. Ndifuna ingcambu kunye ne-voila. Enkosi kakhulu ngegalelo.
Ubusuku obuhle, ngaba umntu unokundinceda?
Kuyandiphosa le mpazamo:
Impazamo: Ayiphumelelanga ukuqinisekisa ukuphela kokudluliswa kwefayile!
Ukulayishwa kweKERNEL akuphumelelanga!
Igqiba iseshoni ...
Ukuqalisa kwakhona isixhobo ...
UCarlos Javier sitsho
Ubusuku obuhle, ndizama ukuhlaziya i-tab1000 pn yam kwaye ndifumana impazamo efanayo naleyo, ngaba uyisombulule? Andikwazi ukuyilayisha ukusuka ku-2.2.1 ukuya ku-2.3.3
Phendula uCarlos Javier
kwaye ukuba iTab yam ine-2.3.6? = / Ngaba uya kufa ukuzama?
Bendidlula apha kwaye ndizokuxelela into endiyenzileyo kudala kwaye isebenze ngokugqibeleleyo emva kweemvavanyo eziliwaka. 1.) khuphela iheindall Suite kunye neKernel humber ginger 2.3.3 p-1000nubjp3.zip. 2. Khuphela iZadig.exe oku kuyakukunceda ngabaqhubi bonxibelelwano ngethebhu. 3.Zisa i-kernel kwifolda.Oku kuya kuvelisa iifayile ezininzi eziza kukucela ukuba wenze njalo. izip.
Sebenzisa i-heindall ejonge phambili kwimowudi yomlawuli qhagamshela i-tab yakho p1000N kwimowudi yokukhuphela
yenza yonke into ekuxelela yona kwifayile: indlela yokuqhuba iHeindall kwiifestile kunye nengcambu
Kukho ibhokisi apho iifayile ekufuneka uzifake kwi-heindall zidwelisiwe xa kufuneka ufake i-kernell, sebenzisa iZimage engaphandle kuphela kwifolda. Play, ukuba inika impazamo 12, sebenzisa zimage.exe, nika imeko ye-heind kwaye uyishiye ifake yonke into, ukuba yonke into ichanekile, uyaphinda uvule i-heindall kwakhona, faka umngxuma owawukade usebenzisa ngaphambili, yongeza i-boot.in kuyo kwaye ungeze i-kernel engaphandle kuphela kwifolda eveliswe yi-zip, oku kuye ukuba yenziwe ngaphandle kophawu lonikezelo.
Masiphinde sisebenzise ngethebhu kwimowudi yokukhuphela kwaye ukuba yonke into iyasebenza iyakuziqala ngokutsha kwaye kuya kuvela i-logo ye-Samsung Tab, linda ithutyana kwaye uyakuva ilizwi elinika imiyalelo kukuba ifaka yonke into kwaye mayiyiqale ngokutsha kunye nayo yonke imigangatho.
UWilliam J. Saume S sitsho
Molo ndoda, ndizama ukwenza lonke uqeqesho kwithebhulethi ye-P1000N kodwa iHeimdall ifumana «Assertion ayiphumelelanga: idilesi yesixhobo ukungqubana nengcambu hub»
Phendula kuWilliam J. Saume S
UJean lombardo sitsho
Impazamo -12: Ukufakwa komqhubi (inyathelo elilodwa kubasebenzisi beWindows)
1.- Ukuba usebenzisa iHeimdall yeWindows, yiya kwifolda yomqhubi ngaphakathi kwifolda yenkqubo, vula ifayile ye- zadig.exe ekhoyo.
2.- Khetha iiOptons-> Dwelisa zonke izixhobo kwimenyu.
3.- Khetha esinye sezixhobo zilandelayo kwimenyu enokwandiswa: I-Samsung USB Composite Device, MSM8x60, Gadget Serial okanye.
4.- Khetha Buyisela uMqhubi (emva kokuba ukhethe uMqhubi ohlohliweyo kuluhlu oluhlayo kwelinye icala).
5.- Umqhubi uya kufakwa kwi-PC yakho, yamkele nasiphi na isilumkiso okanye isaziso esiphumayo.
Qaphela: akukho nto ukunceda ngayo, kodwa ukuba ufuna ukunikela ngento nge-paypal iakhawunti yam yile ikhonkco-fi@hotmail.com
Phendula kuJean Lombardo